ယခင်က ဂျပန်နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ပန်းဟာ ဆာကူရာမဟုတ်ခဲ့ပါ !!! - JAPO Japanese News
ဂါ 27 Jul 2021, 13:39 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားပြုပန်းလို့ပြောလိုက်ရင် အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ချယ်ရီပန်းကို မြင်ရောင် ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
နွေဦးရာသီမှာ ပွင့်တဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစရာချယ်ရီပန်းရဲ့အလှတရားကို တစ်ခြားသောပန်းတွေ မယှဥ်နိုင်ကြပါဘူး။
ချယ်ရီပန်းကို ကြည့်ချင်လို့ နွေရာသီမှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို လာလည်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း အများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီလို ဂျပန်ပြည်ရဲ့မျက်နှာဖုံးလို့လည်းပြောနိုင်တဲ့ ချယ်ရီပန်းဟာ ရှေးတုန်းကတော့ ဒီလောက်ထိအာရုံစိုက်မှုကိုမရခဲ့ပါဘူး။
အခုချယ်ရီပန်းတွေနဲ့ အမျိုးအစားမတူဘဲ ပန်းရောင်ရင့်ရင့်၊ အရွက်နဲ့အပွင့် ရောယှက်နေတဲ့အတွက် အခုလိုမျိုးဆန်းကြယ်လှပမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
မျိုးပြုပြင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိချယ်ရီပန်းပုံစံမဖြစ်ခင်အထိ ဂျပန်ပြည်ရဲ့ကိုယ်စားပြုပန်းဟာ ဂျပန်ဇီးပန်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
လျှပ်တစ်ပျက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆာကူရာနဲ့အရမ်းတူတဲ့ လှပတဲ့အရောင်ရှိပါတယ်။
ဆာကူရာထက် ပန်းပွင့်တဲ့ကာလပိုစောပြီး ဖေဖော်ဝါရီလကနေ မတ်လအတွင်းမှာပွင့်ပြီး၊ ချယ်ရီပန်းထက်လည်း ကြွေတဲ့အချိန်‌နောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့် ပန်းအလှကိုသေချာစွာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ နွေရာသီပန်းကြည့်ပွဲတော်လို့ပြောလိုက်ရင် ဆာကူရာပန်းပွင့်တဲ့ရာသီမှာ ကျင်းပလေ့ရှိပေမယ့်၊ အရင်တုန်းကတော့ ဂျပန်ဇီးပန်းပွင့်တဲ့ကာလမှာ ပန်းကြည့်ပွဲတော်ကို ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။
အပြင်မှာ နည်းနည်းအေးပေမယ့်လည်း နွေဦးရာသီရောက်လာတာကို ကြိုဆိုတဲ့ပွဲဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့စဥ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဂျပန်ဇီးပန်းပွင့်တဲ့အချိန်က ရာသီဥတုနဲ့ ပိုပြီး လိုက်ဖက်နေမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
မျိုးပြုပြင်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက် ဂျပန်ဇီးပန်းထက်လည်း ပိုမိုလှပစွာဝေဆာပွင့်လန်းနိုင်တဲ့ ချယ်ရီပန်းမျိုးပေါ်လာခဲ့ပြီး နေရာလုခံလိုက်ရပေမယ့်လည်း၊ ဂျပန်ဘာသာစကားထဲမှာတော့ ဂျပန်ဇီးပန်း (梅_Ume) ဟာအခိုင်အမာ ဆက်လက်ရှင်သန်နေပါတယ်။
မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ မိုးရာသီ ((梅雨_Tsuyu)။
ဂျပန်ဇီးပန်းမိုး ((梅の雨_ Ume no ame) လို့ရေးပြီး မိုးရာသီ ((梅雨_Tsuyu) လို့ ခေါ်ကြပေ မယ့်၊ ဒီနာမည်ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းကတော့ ဂျပန်ဇီးသီးတွေသီးတဲ့ရာသီမှာ ရွာတဲ့မိုးကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
မိုးရာသီ (梅雨) ဆိုတဲ့စကားလုံးကို “Baiu” လို့လည်း ဖတ်နိုင်ပါသေးတယ်။
တကယ်က “Baiu” လို့ဖတ်တဲ့ပုံစံကို အရင်ဆုံးသုံးခဲ့ကြတာပါ။ ဒီစာလုံးဟာ တရုတ်ဘာသာ စကားကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
မိုးရာသီ (黴雨) လို့ ရေးပြီး Baiu လို့ခေါ်ရာကနေ စတင်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
黴 (Kabi) က မှိုကို ပြောတာပါ။
ဒါပေမယ့် သိပ်မလှတဲ့စာလုံးကြောင့် အခြားစကားလုံးကို စဥ်းစားကြရင်းနဲ့ မိုးရာသီ (梅雨_Tsuyu) ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘာလို့စာဖတ်ပုံက ပြောင်းသွားတာလဲလို့ပြောရရင်
အဲ့ဒီကာလမှာ မိုးကြောင့်စိုထိုင်းပြီး အစားအသောက်နဲ့ အဝတ်အစားတွေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
ပျက်စီးခြင်း (潰ゆ_Tsuiyu) လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ စကားလုံးကနေ မိုးရာသီ (Tsuyu) ဆိုတဲ့ ခေါ်ပုံခေါ်နည်းကို ပြောင်းလဲသွားတာလို့ဆိုကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂျပန်ဇီးပန်းဟာ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး ထင်းရှူးပင်၊ ဝါးပင်နဲ့ ဂျပန်ဇီးပင်တို့ကို ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့ အပင် ၃ မျိုးဆိုပြီး လူသိများကြပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပန်းအနေနဲ့ ချယ်ရီပန်းကိုပဲ အလေးပေးကြပေမယ့် ချယ်ရီပန်းလောက် ဆွဲဆောင်မှုမရှိပေမယ့် လှပစွာပွင့်နေပြီး နွေဦးရာသီရောက်လာတာကို အစောဆုံးသိစေတဲ့ မက်မန်းသီးပန်းကိုလည်း စာဖတ်သူတို့ ဆက်ဆက် လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မုန့်လေးက နှစ်၄၀၀ သက်တမ်းရှိပြီ!?